United Nations in Somalia — Dariiqada Soomaalidu horseedka katahay ee QM ku taageerayso nabadda iyo dhisme dawladeed
Dariiqada Soomaalidu horseedka katahay ee QM ku taageerayso nabadda iyo dhisme dawladeed
Siyaabo Badan, Soomaaliya waxaay furtay cutubyo cusub sanadkan, dawlad cusub oo xilka qabatay, dhismaha dawladda oo lasoo gebagebeeyey, iyo Soomaaliya oo daahfurtay Qorshaheedii ugu horreeyey ee Horumarineed ee heer Qaran (NDP) ee soddonka sanadood ee soo socda. Iyadoo dalka iyo bulshada caalamku ay si aan kala go’lahayn uga wada shaqeeyeen sidii loo joojin lahaa macaluusha daafaha dalka oo dhan, fursadaha lagu taageerayo Soomaaliya si ay usii ambaqaaddo hiigsiga geeddi socodka deganaansho iyo Barwaaqo waqtiga-fog. Wadciga cusub ee taariikhda dalka u bilaabantay, QM waxay weliba daahfuraysaa wareegga cusub ee lagu taageerayo Soomaalida iyadoo la-raacayo Qaabdhismeedka Isteraatijiyadda cusub ee 2017 – 2020.
Laga soo bilaabo 2013, dadaalka horumarineed waxaa hage u ahaa barnaamijka New Deal Somali Compact, kaas oo u qaabaysnaa shan hiigsi oo ku aaddan nabadda iyo dhisme-dawladdeed – hannaan siyaasadeed oo loo dhan yahay, nabadgelyada, caddaaladda, seesaska dhaqaalaha, dhakhliga iyo adeegyada – iyo jinsiga iyo horumarinta awoodda wax-qabad si isku-dhafannaan ah (cross-cutting issues). Markii barnaamijkii Compact uu dhammaanayey sannadkii 2016, waxaa dibuhabayn lagu sameeyey Isteraajiyadahii mudnaanta u ahaa Qaranka iyo QM.
Soomaaliya markii ay samaysanaysay Qorshaheeda Horumarineed ee Heer Qaran ee ugu horreeyey (NDP) ee muddada ka billaabmaysa 2017 – 2019, iyadoo la raacayo barnaamijka Iskaashiga Cusub ee Soomaaliya ee ay ku heshiiyeen Soomaalida iyo Beesha Caalamka, QM waxay dib-u-qiimayn ku samaysay Isteraajiyaddeeda mudnaanaha u ah iyo hawlaha u qorshaysan inay ka fuliyaan Soomaaliya wavayna dejisatay arrimaha mudnanaha u ah Qaabdhismeedka Isteraategiyaddeeda cusub taas oo u saamaxaysa in laga taageero Soomaaliya si ay u fuliso hawlaha mudnaanaha u ah ee heer qaran (national priorities).
Sidee bayne u qabanay hawshaas?
QM waxay ku billawday hawlo-taxane Sahanno Muhiim ah oo qabsoomay bishii Oktoobar 2016, kaas oo lagu qiimeenayey horumarka waxqabadkii QM gaadhay iyo hawlihii u qabsoomay qoshe-hawleedkii afartii sannadood ee lasoo dhaafay.
Si hawlahaas sahmintu u noqoto mid taabbo-gal iyo xeeldheeri ah, QM waxay ka qabatay hawlo wacyi-gelin baaxad leh si loo soo ururinayo xogaha iyo arrimaha muhiimka ah, caqabadaha iyo rajooyinka Soomaalida – iyo waxa ay noqon karto doorka iyo waajibaadka QM ka qaadan karto. Saddexda su’aalood ee ugu waaweyn ee la-iswaydiiyey in ka Badan 30 kullamo-wadatashi oo lala sameeyey hay’adaha dawladda (dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada), hawl-wadeenada waddaniga ah ee QM, bulshada rayidka ah, Hay’adaha Samafalka Maxaliga ah, deeq-bixiyayayaasha iyo hay’adaha muhiimka, iyo kumannaan dadyawga Baraha Internet-ka nagala socda:
Halkee baad la’jeclaan lahayd in Somaliya u muuqato (dhabahaan) sanadka2020? Maxayse tahay aragtidaadu?
Maxay yihiin cabirada (Indicators) muujin-kara guulaha aragtidaas fog”
Maxay tahay doorka QM inay ka ciyaarto ama ka qaadato hawlaha ku aaddan aragtidaas fog?
Natiijada ka soo baxday, in ka Badan 530,000 qof oo lala sameeyey wadatashiyo iyo xidhiidho lagula sameeyey baraha bulshada ee Internet-ka, waxay muujinaysaa in ka Badan 1,000 oo fikirkooda ka dhiibtay saddexdaas su’aalood, ayaa lagaga dooday kullamo-wadareed khaas ah.
Sahmintaas Muhiimka ee taxane ah, waxaa lagu soo gebagebeeyey warbixin, waxyaabihii ka soo baxay iyo talosoojeedinno, Qorshe Horumarineed ee Heer Qaran (NDP), iyo barnaamijka Iskaashiga Cusub ee Soomaaliya, oo laga sameeyey arimaha salka u ah barnaamijka Istraatijiyadda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSF).
Haddaba, waa maxay Qaabdhismeedka Istraatijiyadda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSF)?
Waa Qorshe Isteraatejiyadeed si ay u hagto hawlaha QM ka waddo Soomaaliya. Qaabdhismeedka Isteraategiyadeed ee QM waa mid la mid ah kan ka jira dal kasta halkaas oo QM ay ku leedahay suganaansho.
Qaabdhismeedkan waa mid si guud ay uga go’antahay qaabaynta mudnaanshaha hawlaha lagu taageerayo Qorshaha Qaran ee Horumarinta dalka iyo in laga taageero Hadafyada Horumarinta ee Caalamiga ah (SDGs). Qaabdhismeedka Isteraatejiyadda QM (UNSF) ee Soomaaliya waa mid waafaqsan Qorshaha Horumarineed ee heer Qaran (NDP), wuxuuna sheegayaa hawlaha mudnaanta u ah qaranka. Qaabdhismeedka Isteraatejiyadda QM waa mid daarran ‘yaan waxba laga tegin’ iyo in la abuuro la-xisaabtanku aaddan xuquuqda aadanaha, sinnaanta Jinsiga iyo awoodaynta haweenka, sii-jiritaanka iyo u-dhabaradayga.
Qaabdhismeedka Isteraatejiyadda QM (UNSF) waxay u dhisantahay shan Isteraajiyadood oo mudnaan u ah:
Shanta Isteraatejiyadood ee mudnaanta ah waxaa lagu xoojiyey hawlaha xuquuqda aadanaha, sinnaanta Jinsiga iyo awoodaynta haweenka, iyo ka-qaybqaadashada iyo awoodaynta dhallinyarada, kuwaas oo ah arrimo ka wada dhaxeeya qaabdhismeedka Isteraatijiyadda QM (UNSF).
Sidee bay arrantani muhiim ugu tahay Soomaaliya iyo Soomaalidaba?
Tan iyo markii Qaabdhismeedka Isteraatejiyadda QM (UNSF) la waafajiyey hawlaha qaranka mudnaanaha u ah, sida ku muujisan Qorshaha Horumarineed aa Qaranka (NDP), QM ee Soomaaliya waxay ku taamaysay inay si toos ah uga caawiso sidii loo gaadhi lahaa hawlaha qaranka mudnaanta u ah afarta sanadood ee soo socda. Qaabdhismeedka Isteraatejiyadda QM (UNSF) wuxuu hagi doonaa dhaqaalaha iyo mashaariicda ku aaddan hawlaha mudnaanta u ah. Islamarkaana, QM waxay weliba raacaysaa qodobada Heshiiska Iskaashiga Cusub ee Soomaaliya (MPS). Iyadoo la raacayo Heshiiska Iskaashiga Cusub, bulshada caalamka waxaa ka go’an inay waafajiyaan taageerada horumarineed ee Soomaalida Qorshaha Horimarineed ee Qaranka (NDP), iyo in la xaqiijiyo Iskaashiga ka dhaxeeya Soomaaliya iyo bulshada caalamka si ku sallaysan qodobada wada-xisaabtanka la isla fahmsanyahay.
Waxaa intaasdheer, xogta aanu ka helnay mudadii Hawlaha Sahminta muhiimka la waday oo si toos ah sal u ahayd dooddahayagii waxyaabaha mudnaanta noo noqonaya mustaqbalka iyo qaabaynta waajib-gudashadayada. Siday ahaanayso? Tusaale ahaan, quuddarayn xooggan oo dhinaca dadweynaha ah darteed, waxaanu si firifircoon u qaadanay hannaanka maamul wanaagga, hufnaanta, iyo wada-xisaabtan ay ahaadaan waxyaabaha cusub ee aanu diiradda saarayno. Tusaale kalena waa dhawaaq xooggan sidii iskaashi weyn loola yeelanayo bulshadarayidka ah ee Soomaalida gaar-ahaan kooxaha dhalinyarada taas oo loo fasiray qodobo iskaashi oo xooggan iyo hannaan uu ku qotomo Qaabdhismeedka Isteraatejiyadda QM (UNSF) si loo horumariyo ka-qaybqaadashada bulshada rayidka ah u noqdo Iskaashi waara.
Hannaankii lagu dejinayey Qaabdhismeedka Isteraatejiyaddan QM (UNSF) waxay ahayd midi si weyn ee laga wada-qaybqaatay iyo tallaabo muhiim ah oo ay muwaadiniintu hoggaaminayeen gudaha QM waxaana loo aqoonsanyahay inay ahayd ficil wanaagsan. Saxeexidda iyo daahfurka ee Qaabdhismeedka Isteraatejiyadda QM (UNSF) lala samaynayo Dawladda Federaalka Soomaaliya, waxay hadda inoo tahay waqtigii aynu hore u sii ambaqaadka iyo taageerada Soomaalida ee nabadda socota iyo wadiiqadii dhisme dawladeedka.
Kala soco hawlahayaga baraha Internet-ka si aad ugu soo biirtid geediga.
Newer PostSOMALIA PARTNERSHIP FORUM COMMITS TO PREDICTABLE AND SUSTAINABLE SUPPORT FOR COUNTRY
Older PostThe UN’s Somali-led path to supporting peace and state-building